Mpanamboatra fonosana harona ambongadiny sy mpamatsy | Riqi Filter
Izahay dia manolo-tena hamatsy ny ampahany sy serivisy rehetra ilainao mandritra ny androm-piainan'ny fitaovanao mifehy ny fahalotoan'ny rivotra.
Ny tranom-kitapo sivana dia ny fanohanan'ny kitapo sivana ary tokony ho maivana sy mora amin'ny fametrahana sy fikojakojana izany. Ny kalitaon'ny tranom-borona sivana dia misy ifandraisany mivantana amin'ny toetran'ny sivana sy ny ain'ny serivisy amin'ny kitapo sivana.
2.Product Parameter (famaritana)
Famaritana ho an'ny sivana kitapo sivana miaraka amin'ny venturi ho an'ny mpanangona vovoka
Karazana Fomba boribory / Fomban'ny fisaka / Fomban'ny valopy / Fomba manokana
Isan'ny tariby 8/10/12/16/20/24 tariby mitsangana
Ring Space Ny fenitry ny elanelan'ny peratra dia 6 santimetatra na 8 santimetatra. (15.24cm na 20.32cm)
Cage Diameter Ny savaivon'ny tranom-borona dia manomboka amin'ny 4 inch ka hatramin'ny 8 inch (100mm ka hatramin'ny 200mm)
Ny hatevin'ny tariby Ny halavan'ny tariby dia 2mm ka hatramin'ny 5mm
ara-nofo Steel vy, vy nandrisika, vy tsy miova
Famaranana Epoxy, coating vinyl PVC
Fonosana Cages dia fonosina anaty baoritra namboarina manokana
Fampiasana Vovoka avy amin'ny oziniko, hazo, simenitra, simika, fanafody,
maty, Paint, plastika, sakafo & indostria hafa, toy ny arintany
tobin-jiro, toby famokarana herinaratra, indostrian'ny simenitra, indostrian'ny taratasy & ampahana indostrialy hafa.
tombony 1, Tsy misy harafesina, tsy misy simba
2, 3-5 fotoana lava kokoa noho ny tranom-kitapo hafa misy vy
3, Fikolokoloana ara-toekarena (saika tsy ilaina ny fikojakojana)
4, vokany miavaka amin'ny fanesorana ny vovoka amin'ny Filter amin'ny alàlan'ny famonoana
5. Mora apetraka (tsy ilaina ny Venturi)
Fomba boribory Diameter (mm) Kitapom-batsy (mm) Halavany (mm)
120 135 Halavany (mm)
190 200 Halavany (mm)
Fomba fisaka paritra Kitapo Perimeter 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, 4000,
800 800 Halavany (mm)
Envelope Style Haben'ny hatevin'ny hateviny Kitapo matevina amin'ny halavan'ny kitapo
3.Fitaovana sy fampiharana amin'ny vokatra
Ny fananganana tranokala dia matetika misy tariby mitsangana 10, 12 na 20.
Ny elanelan'ny peratra marindrano amin'ny tranom-borona dia mety ho 4 ″, 6 ″ na 8 ″.
Ny savaivony tranom-borona dia manomboka amin'ny 4 ″ ka hatramin'ny 6 1/8 ''
Ny elanelan'ny hatevin'ny tariby dia; 9 refy, 10 refy ary 11 refy
Ny halavan'ny Venturis dia tonga amin'ny 3 ″ ka hatramin'ny 6 ″.
Misy tranokala manokana ihany koa
Teo aloha: vy harato
Manaraka: PTFE kofehy manjaitra
Ny famaritana ny takelaka sivana takelaka dia ny ampahany fototra amin'ny sivana fanontana. Ny fitaovana, ny maodely ary ny kalitao samihafa dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fahombiazan'ny filtrasiôna manontolo. Ny lavaka fihinanany, ny fizarana teboka sivana (fantsona sivana) ary ny fantsom-panafahana rano dia manana endrika samihafa arakaraka ny fitaovana samihafa. Fandraisana an-tsoratry ny takelaka fanivanana mari-pana avo lenta fanoherana fanamafisana tsara sy fanasana mofomamy Anti-harafesina filtration fohy isaky ...
PP Filter CartridgesFaritry ny fanafody plastika PP sivana PP novolavolaina ho an'ny filàna voafaritra ao amin'ny indostrian'ny fanafody. Ny faritra rehetra amin'ny cartridge sivana dia avo lenta mifanaraka amin'ny takiana amin'ny pharmaceutika. Ny tontolon'ny famokarana henjana sy ny fitsapana dia manome toky fa azo antoka ny filtration. ▶ Kalitao manify pp tsara indrindra manivana effec ...
1. Fampidirana vokatra Ny kofehy fanjairana PTFE dia vita amin'ny Fiber PTFE Filament. Ny fibre polytetrafluoroethylene, antsoina hoe fluon any Shina, dia fibre synthetic vita amin'ny resina PTFE amin'ny alàlan'ny fizotrana manokana. Miaraka amin'ny toetra mampiavaka ny fitoniana simika tsara an'ny PTFE, dia be mpampiasa amin'ny sivan-tsivana amin'ny mari-pana avo, asidra mahery ary toetrany mafy. Ny fibre PTFE dia azo sokajiana ho ao anaty fibre Staple White sy Fibre Staple Brown. Ny fibra volontsôkôla dia novokarina avy tamin'ny emulsion namboarina notsaboina tamin'ny ...
Ny cartridges sivana membrane PVDF sivanan-tsolika Micron Filter Cartridges hydrophobic cartridges sivana membrane PVDF dia novolavolaina ho an'ny fanivanana entona voasivana sy fanivanana vent. Ny faritra rehetra amin'ny cartridge sivana dia avo lenta mifanaraka amin'ny takiana amin'ny farmasia. Ny rafitra manokana dia manimba bakteria ny pore membrane. Ny tontolon'ny famokarana henjana sy ny fitsapana dia manome antoka ny filaminan'ny filtration. ▶ Ny membrane avo lenta dia manome fahafaha-mitazona loto, fampidinana tsara ary ...